Diraama Dheebuu marsaa 1ffaa kutaa 60ffaa irratti goolabamuusaa barreessan diraamicha Obbo. Qalbeessa Magarsaa ibsaniiru. Diraama Dheebuu daawwattoota hedduun kan dinqisiifatame yoo ta’u, biyya keessa fi biyyoota alaa haala gaariin hordofamaa ture. Haa ta’uyyuu erga qillensarraa oole diraaman kun waggaa tokko guutee jira. Waggaa tokko kana keessatti immo kutaale 60 haala ho’an torbee torbee dhan televishinaa Oromiyaa irratti kan darbaa ture.
Dhaamsa Obbo. Qalbeessa Magarsaa toora youtube irratti kan daawwatootaf dabarse haala kanaan isiniif barreesse.
“Hordoftoota diraamaa keenyaa bakka jirtan hundatti nagaan isiniif haata’u jechaa diraamaa keenya hamma kutaa kanaa haala gaariidhaan hordoftanii kunoo ammammoo marsaa lammaffaaf yaada ummataatiif boqonnaarra jirra. Isinis yaada nama gabbisu adda addaa nuuf kennaa turtaniirtu. Haaluma kanaan ammas akka yaada keessan nutti hinqusanne isin gaafanna.”
Warrotni diraama dheebuu kutaa 1ffaa-60ffaa hunda kan daawwattan isa kanarratti yaada keessan yommuu kennitan Diraamaa kanarratti hanqinaaf cimina jiru hunda isaa obbo. Qalbeessaaf toora facebook isaa ykn youtube isaa irratti barreessuu dandeessu. Akkasumas dhaamsa fi yaada gama marsariiti keenyarratti ergame nutiis gama Obbo. Qalbeessatti ergina!
Hamma Marsaa 2ffaatti walitti deebinuutti kutaa 60ffaa isiniif afeerree jirra!
hedduu galatooma ummata keessaan illeen yaadadha!